6-10KVA uhlolwe High Frequency (1: 1)
IINKCUKACHA YOPHANDO *
Venus series yi kabini-ukuguqulwa aqhelelkileyo UPS nomnikezi imveliso ngamandla factor 0.8. yenzelwe ukusebenza kwiindawo ngamandla kakubi. Bona inika amandla ezixineneyo kunye ixesha elide elilalela in ubukhulu compact. Yinto ilungele-ATM, zebhanki kunye nezinye zoshishino izicelo ezibalulekileyo. Abasebenzisi kwakhona uyakwazi ukunyenyisa ukutshajisa yangoku ukusuka 1A 6A njengako ezahlukeneyo applications.Venus Series Kwakhona USB kunye RS-232 amazibuko nonxibelelwano standard, kunye slot eyakhelwe-ngaphakathi okrelekrele ngenxa amaqhoshana ezongezelelweyo, converters protocol kwaye babalise amakhadi contact.
1.True kabini-uguqulelo UPS online
A uhlolwe okwenyaniso uguqulelo kabini iza kubonelela acocekileyo, umgangatho ophezulu amandla umgangatho ukukhusela ngokupheleleyo izixhobo mission-ezibalulekileyo ezifana networks ezibuthathaka, amaziko ikhompyutha encinane, iiseva, izicelo Telecom, ngokunjalo izicelo mveliso.
2. Isiphumo amandla factor 0.8
Kuthelekiswa UPS online kwimarike lwangoku, Venus series UPS ibonelela ngcono amandla output factor ukuya ku 0.8. It inikeza ukusebenza ephakamileyo effciency zokusebenza ezibalulekileyo.
3. Wide lomqolo longeniso ombane (110V-300V)
Venus series uyakwazi ukunika amandla esitalini kumacebo enxulumene phantsi imeko lwamandla ezingazinzanga.
Tshixa frequency imveliso kwi 50Hz okanye 60Hz ukuze zilungele amandla Equipments ezibuthathaka.
5. operation mode ECO for okonga umbane
Uyababonelela ukusebenza phezulu 97% ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla & iindleko. isicelo amandla UPS nge yokucima emile, ngexesha abuyele ukuguqulwa online kabini xa kukho imfuneko yoko.
6.Emergency Power Cima (EPO) Umsebenzi
Lo msebenzisi ukufumana abasebenzi kunye nezixhobo kwimeko umlilo okanye ezinye kaxakeka.
7. technology DSP isicelo imifuziselo 6-10K
A isilawuli DSP kunika ephuculiweyo kunye neendleko-olusebenzayo isisombululo kunye nokusebenza eliphezulu.
• uhlolwe nga sidityaniswe kwi computer nge USB okanye Rs232 interface. Ngoko ke, kubonakala LAN esweni ngeeseti omnye okanye abaninzi UPS, liphinde kungaba esweni ezinye amahla leyo edityaniswe kwi computer nge LAN.
• ukubeka iliso uhlolwe software uneendidi ngaphezulu kwe 10 ulwimi ukhetho.
• Humanized interface msebenzi, nto leyo linamandla yaye ungakwazi ibonisa ombane ibhetri, rhoqo, umthwalo, ubushushu kunye nezinye iinkcukacha nge-time real esweni nge ngeetshathi.
• Alarm okwenzeke amandla eyahlukileyo kusetwa ngonomathotholo, phone imiyalezo ehambayo, e-mail SNMP njl
Size , DXWXH (mm)
Weight Net (Kum)
Dlulisa Line Low
110 VAC ± 3% kwi-50 Layisha%; 176 VAC ± 3% kwi-100% Umthwalo
Low uzakubuyiswa Line
Low Ilahleko Voltage Line + 10V
Dlulisa Line High
Line High uzakubuyiswa
Line High Ilahleko Ingozi - 10V
Isigaba Single nedlelo
≧ 0,99 kwi-100% Umthwalo
208/220/230 / 240VAC
Range Ubuninzi (Batt. Mode)
50 Hz ± 0.1 Hz okanye 60Hz ± 0.1 Hz
100% ~ 110%: 10min, 110% ~ 130%: 1min,> 130%: 1sec
100% ~ 110%: 30sec, 110% ~ 130%: 10sec,> 130%: 1sec
Crest Current Ratio
≦ 3% @ 100% Linear Layisha; ≦ 6% @ 100% Non-yomgama Layisha
Mode AC ku Batt. mode
Inverter ku Dlula
Amaza (Batt. Mode)
iiyure 9 ukubuyisa kwi 90% amandla
Okwendalo: 4 A ± 10%; Max .: 6A ± 10%
Okwendalo: 1 A ± 10%; Max .: 2A ± 10%
0 ~ 40 ° C (umjikelo ubomi bebhetri iya ulenze lufutshane xa ubushushu ungaphezulu kwama-25 ° C)
<95% and non-Ukujiya
<55dB @ 1 imitha
<58dB @ 1 imitha
RS-232 Smart okanye USB
ulawulo Power evela kumphathi SNMP kunye browser web
Wula: Products iinkcukacha zixhomekeke ukutshintsha ngaphandle kwesaziso.
Data Iqhubekekisa Centre
Previous: 10-30KVA High Frequency Online UPS (3: 3) Okulandelayo:1-3KVA uhlolwe High Frequency (1: 1)
1-3KVA uhlolwe High Frequency (1: 1)
1-3KVA High Frequency UPS Ndikunye = Yakhelwe-Ibhetri ...